တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမည့်အကြောင်းကိုဦးသိန်းစိန်းအတည်ပြုပြောကြား | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာဟာဥပဒေအရဆက်ချုပ်နှောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသောကြောင့်လို.ဦးသိန်းစိန်းကရှင်းပြသည့်အခါဗမာပြည် မှာဥပဒေရှိသယောင်ယောင်ပြောသွားသေးတာကိုအဘီဆစ်က ခီ…ခီး…ဟီ.. လို.ရီးပြီးကောင်းပါတယ်လို.ပြန်ပြောသတဲ့၊ဒါပေမဲ့၊မောင်သိန်းစိန်းစကားကို မယုံသည့်သူများနေတော့၊နိုင်ငံတကာရဲ.ဖိအားပေးမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို.လွှတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို.မေးတော့၊မောင်းသိန်းစိန်းက`“နိုင်ငံတ ကာကိုငါတို.ကြောက်စရာလာကွ..လို.ပြန်အော်လိုက်သတဲ့။
PHNOM PENH, Nov 17 – Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva said on Wednesday Myanmar Prime Minister Thein Sein has informed him that sporadic fighting between government troops and ethnic armed forces is likely to continue in border areas, while urging Thailand to help take care of the Myanmar people who flee into Thailand to escape the clashes into the neighbouring territory.
Mr Abhisit said he has discussed with Mr Thein Sein over the clashes between the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) splinter faction and the Myanmar army along the Thai-Myanmar border which erupted immediately after the country’s first election in 20 years on Nov7and had an impact on Thailand.
Some 20,000 Myanmar people fled fighting in Myawaddy into Mae Sot district in Thailand’s Tak province, while several thousands crossed the border to Kanchanaburi’s Sangkhla Buri district as the DKBA faction clashed with Myanmar troops in the Myanmar border town of Phaya Tong Su.
When asked whether Suu Kyi’s release will ease pressure from the international community on Myanmar, Mr Abhisit said it depends on the stance of western countries, which is now still unclear.